तीन महिनापछि खुलेकाे बजारमा लगानीकर्ताकाे मुड कस्ताे हाेला ? – BikashNews
तीन महिनापछि खुलेकाे बजारमा लगानीकर्ताकाे मुड कस्ताे हाेला ?
२०७७ असार १५ गते ११:४८ विकासन्युज
काठमाडौं । धितोपत्रको दोश्रो बजार आज ९८औं दिनपछि खुलेको छ । लामो अवधिपछि खुलेको बजार के होला ? बढ्ला कि घट्ला ? लगानी गर्ने कि नगर्ने ? भन्ने आम लगानीकर्तामा परेको छ ।
यस विषयमा नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका पूर्व अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद पौडेलले भने बजार शुरुमा घट्न सक्ने बताए । तर आज नै बाउन्स ब्याक पनि हुन सक्ने उनले बताए ।
सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष उत्तम अर्यालले आजको बजारमा केहि गिरावट आउन सक्नेछ तर दुई चार दिन पनि सम्हालिने बताएका छन् ।
‘प्यानिक अवस्थाको बजार छ । लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको अवस्था छ । त्यसैले केहि गिरावट आउला तर त्यति धेरै गिरावट चाहि आउने छैन । किनभने बजारमा आएका सकारात्मक कुराहरु जस्तै, पुँजीगत लाभकरमा स्पष्टता भएको छ । मौद्रिक नीतिमा मार्जिन कल बढाउने भन्ने कुरा भएको छ । इन्भेष्टमेन्ट बैंकको २ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता आएको छ । यी कुराले बजार त्यति तल जाँदैन । आजको बजारमा सेलिङ प्रेसर आउने छ । आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन केहि दिनमा बजारले आफ्नो गति लिन थाल्छ ।’
त्यस्तै, नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले पनि प्यानिक पछि खुलेको बजारमा केहि गिरावट आउने बताएकी छिन् । लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भएको छ, बजार केहि तल जान सक्छ त्यसैले सकेसम्म केहि दिन सेयर होल्ड गर्न उनले लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गरेकी छिन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारले जस्तै नेपाली पुँजी बजारले पनि एक दुई दिन पछि आफ्नो गति लिन सक्ने उनले बताइन् ।
‘लामो समयदेखि बन्द भएको पुँजी बजारमा अत्यावश्यक कामको लागि रकम निष्काशन गर्न पाइएको छैन । पीडित लगानीकर्ताहरुले खर्चको जोहो गर्ने भएकाले आइतबारको बजारमा बिक्री चाप बढ्न सक्ने छ ।’
‘अर्काे, हातमा पैसा लिएर बस्नेहरु पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा नै हुने छन् । कोरोना महामारीको अवस्थामा फेरि पुँजी बजार घट्छ । र अहिले बचेर पछि घटेपछि किनौला भन्ने लगानीकर्ताको मनोविज्ञान पनि रहेको हुन्छ । यसका साथै, असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा मार्जिन कल र व्याज तिर्ने चटारोको प्रेसर पर्न सक्छ ।’- अध्यक्ष पाेखरेलले बताइन् ।
बजारमा आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । बजारले २/४ दिन पछि गति लिन्छ त्यसैले केही दिन होल्ड गर्न उनले सबैलाई आग्रह गरेकी छिन् ।
धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीले सेयर कारोबार गर्न नपाउने